Isimemo ku-prom ngezandla zam (isifundo somntwana / isigaba 4), iklasi yeklasi kunye nesithombe, ividiyo Iingcamango zesimemo
Okunye Ieholide Ukugqiba iziqu
Umbhalo wekhadi lesimemo kwi-prom
Iqela labagqwesileyo labafundi abasesikolweni sibabalulekileyo esibalulekileyo kungekhona kubantwana kuphela, kodwa nabazali. Kuza ukuqonda ukuba ubuntwaneni sele buphelile kwaye isigaba esitsha sokuphila siza. Abantwana basondela kwisiganeko.
Ukuba ufuna ukunikela ngabanye kwiholide, isimemo esingathandekiyo kwisiphakamiso okanye inqanaba lesi-4, esenziwe ngezandla zomntu, yindlela enye yokwenza. Kananjalo sikubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zeendinyana zesimemo.
Isimemo sodwa kwi-prom in the classroom kunye neklasi ye-4. Ukwenza isimemo kwi-prom ngezandla zabo ngezandla nge-step instruction Isimemo kwi-prom, i-scrapbooking style, i-class master-class. Iingongoma zezimemo zokugqweswa kwi-kindergarten kunye ne-4 bakala
Isimemo sakho ngokwakho ekugqibeleni kwi-kindergarten kunye neklasi ye-4
Abagqwesileyo besikolo esincinane bangenza isimemo ngokwabo. Ukwenza isimemo kwisigidi sokufundela kubantwana abancinci, kunokufuneka ukuba ufake umzali okanye utitshala.
Izinto ezifunekayo zesimemo
Ukwenza iposikhadi, udinga ingcamango encinane kunye neetayitile ezincinci zezixhobo:
tape iteksi yesibini.
Kwaye kunye neeseti ezincinci zezixhobo ezinokufumaneka kuyo yonke indlu:
ifomathi yekhadibhodi elula;
ikhadibhodi ebhalwe nge-12x8;
Umgca omncinci wekhadibhodi enemibala;
iintyatyambo ezenziwe ngokulungelelanisa kwi-Ribbon ayikho enkulu;
Ukwenza isimemo kwi-prom ngezandla zakho - isinyathelo ngemigaqo yesinyathelo
Thatha ikhadibhodi uze uyibophe ukuze elinye icala lide lide.
Ngokukhawuleza ulungiselele ikhadi le-invoyisi. Ukusebenzisa ipensela nomlawuli silinganise ubungakanani obufunekayo, malunga ne-12x8cm. Kufanele kube ngaphantsi kwecala langaphambili leposi emva kwe-1 cm ukusuka kwicala ngalinye. Sika, zama, ukuba ufuna ukunciphisa ubungakanani.
Ngecala langaphambili lommakishi wesimemo phantsi komlawuli, sisebenzisa umgca ohambelanayo-ukulinganisa umthunzi, ukubuyela kwi-0.5 cm kwicala ngalinye.
Isinyathelo esilandelayo kukuba uqhotyoshelise idilesibhodi ye-invoyisi. Oku kunokwenziwa ngeendlela ezimbini: mhlawumbi ngeglue, okanye nge-scotch yesibini.
Kwinqaku! Itheyipu yomgca wesibini ingamabini amabini. Emva kokulungiswa kwekhadibhodi ye-invoyisi ngolwesibini, uya kufumana ikariti ye-volumetric.
Umbhalo othi "Isimemo" sinokwenziwa ngezindlela eziliqela. Into elula kukuba uthenge isitampu esenziwe ngokufanelekileyo. Kodwa andinayo le nto, ngoko ke iteksi elincinci lekhadibhodi sibhala nje ngesandla.
Ukuze wenze ukubhalisa kunomdla ngakumbi, lungise nge-tape enkulu okanye ngokuguqula i-tape maxesha amaninzi kwimida yebhaliso. Imijikelo inganqunyulwa yi "flag" okanye ingene ngaphakathi.
Ukuqokelela iteksi kwiintshintsho ezincinci uze uzixakeke kunye nomgxinisi. Gcoba intyatyambo ekhoneni kunye nefayili efanayo.
Iiphelo zeetape zingagcinwa ngokukhawuleza, ziqiniswe "ngongqongqelo" ngentsimbi encinciweyo yokuloba okanye, ukufafaza i-tape kunye ne-hairspray, umoya epencileni kwaye uyibambe ukuze uyenze.
Ukuze unamathele kwi-tape iqela elincinci le-adhesive tape kunye nokulungisa ii-florets.
Kule nqanaba, ungaqhubeka nokuyila ngaphakathi kwesi simemo. Ngomda ojikelezayo weposikhadi ngobumnene unamathela kwi-lace ye-tape ye-tape efanayo.
Kwinqaku! Ukuxhaswa kwetheyibhile yokubambelela emacaleni emibini kuya phezulu kangangokuthi nayo unokukwazi ukulungisa ngokuqinisekileyo izinto ezibonakalayo zohlobo lwezakhiwo ezahlukeneyo: iingubo, iphepha, iplastiki, ukhuni, njl. Ndiyabulela kule ndlela elula, unokuyenza ngaphandle kweglue. Izinto ezibonakalayo kulula ukuyisebenzisa. Bonke abafundi bebanga lesi-4 banokujamelana nomsebenzi onjalo ngokulula.
Indawo ekhululekile yangaphakathi yethemplate igcinelwe isicatshulwa. Ezi zinokubongozwa ngeememo okanye isimemezelo. Umbhalo ungabhalwa ngesandla okanye uprintwe. Ishidi lesayizi elungileyo lichanekileyo kunye ne-tape yokubamba.
Ndafumana amaninzi amacandane ngama-denticles, elula ngokukhawuleza ngekhadibhodi kwaye agqityiwe kwicala eliphambeneyo. Ngoncedo lwabo, ukuba unqwenela, unokulungisa izilwanyana ezinqunywe okanye irayibhile kwiphepha.
Jongise ikhadi ngeepayteste okanye kwiintsimbi.
Isimemo esinjalo sokwenza lula kwi-nursergart okanye kwibakala lesi-4, akunakushiya iindwendwe ezingenamntu.
Isicatshulwa esikhulu sokugqwesa kwi-nursergart zikhangele apha
Isimemo sokugqweswa kwisigqibo se-scrapbooking, i-class master-class
Imiba yesivakalisi kwi-prom in nursergen kunye neklasi ye-4
Ezi zibhalo zeimemo zobusuku obungasetyenzisiweyo zingasetyenziselwa iethemplate kungekuphela kweeholide kwintanga yesibini okanye kwinqanaba eline-4, kodwa kunye nebhola lokuphumelela esikolweni esiphakeme.
Isimo esihle kakhulu sokugqwesa kwisigaba se-4 sibone apha
Ukuthintela ukuthokoza kubazali ekugqibeleni kwi-nursergart, 4, 9, 11 kwiklasi kwivesi kunye neprose
Impendulo echaphazelayo evela kubazali ekugqibeleni kwi-kindergarten, 4, 9, 11 class
Isikripthi sokugqibela sofowuni kubafundi abaphumelele kumaBakala 9 no-11
Ukuthintela iindinyana zokugqwesa kwi-kindergarten, 4, 9, 11 class
Imithetho ebalulekileyo yokuphila ngendlela enempilo
Indlela yokukhusela umbala weenwele ekutshiseni?
Indlela yokubala intlawulo yekhalori yansuku zonke
Lixesha lokuba nosana?
Dorada nge mifuno
Uvelwano njengendlela yokulawula iingxabano
Umdlali omkhulu uAna Samokhina
Iipancakes kunye noshizi, i-cherry, i-strawberry kunye ne-vanilla
Ukutolika kwamaphupha: Yintoni ukulwa
Inyanga yesine yokukhulelwa
Ukuziphatha kwamadoda xa udibana nomfazi
Umbhali waseJamani uErich Maria Remarque
Ukutya kunye ne-gastritis yesisu
Utyando olusondeleyo lwamadoda
Uthande ixesha lokuhamba
Amoveo SPA - eyona nto ingcono kumzimba nomphefumlo